နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များမှ တိုင်းရင်းသား ရေးရာ ဝန်ကြီးများအား တွေ့ဆုံ အမှာစကားပြောကြား | Myanmar President Office
You are hereအဖွင့်စာမျက်နှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များမှ တိုင်းရင်းသား ရေးရာ ဝန်ကြီးများအား တွေ့ဆုံ အမှာစကားပြောကြား
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များမှ တိုင်းရင်းသား ရေးရာ ဝန်ကြီးများအား တွေ့ဆုံ အမှာစကားပြောကြား
Prev Next«» ဓာတ်ပုံများ
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ပထမဆုံးသမ္မတ ဂျော့ရှ်ဝါရှင်တန်၏ အိမ်တော်ကိုသွားရောက်လေ့လာ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် CNN နှင့် Washinton Post သတင်းမီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အခြေအနေများကို ရှင်းလင်းဖြေကြား နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ရောက်ရှိနေကြသည့် မြန်မာမိသားစုများအား တွေ့ဆုံအမှာ စကားပြောကြား နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုသို့ရောက်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် အလုပ်သဘောခရီးသွားရောက်ရန် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု သို့ ထွက်ခွာ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း မဟာစင်နှင့် ပတ်သက်သည့် ကြိုတင်ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး ကျင်းပ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် မန္တလေးမြို့ အမျိုးသားဇာတ်ရုံ၌ ကျင်းပသည့် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် လူမှုစီးပွားဘဝ မြှင့်တင်ရေး အခမ်းအနားတွင် အမှာစကား ပြောကြား နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် စက်မှုလယ်ယာမြေ ဧက (၃၀၀၀) ကြည့်ရှု စစ်ဆေး နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နယူးယောက်မြို့ အခြေစိုက် Clinton Health Access Initiative၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Mr. Ira Magaziner ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် မူးယစ်ဆေးဝါး ပူးပေါင်းထိန်းချုပ်ရေး ဆိုင်ရာ ကမ္ဘောဒီးယား၊ တရုတ်၊ လာအို၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံနှင့် UNODC တို့မှ ကိုယ်စားလှယ် ခေါင်းဆောင်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် နိုင်ငံရေးပါတီများမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် နေပြည်တော်ရှိ တောင်သူပညာပေး ဧက ၅ဝဝ စက်မှုလယ်ယာစံပြစိုက်ခင်း အစည်းအဝေးခန်းမ၌ တွေ့ဆုံ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ Pages1
ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ အနောက်ပိုင်း Perth မြို့ရှိ Curtin University မှ ပါမောက္ခ Andris Stelbovic ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ ဒုတိယသမ္မတဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း ဧရာဝတီတံတား(မလွန်) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် အမှာစကားပြောကြား ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း H.E. General ChavalitYongchaiyudh ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း လက်ဘနွန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာဂုဏ်ထူးဆောင် ကောင်စစ်ဝန်ချုပ် Mr. Elie Debahy အား လက်ခံတွေ့ဆုံ ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း တက္ကသိုလ် ပညာရေးအဖွဲ့များကောင်စီနှင့် တက္ကသိုလ်များ ဗဟိုကောင်စီ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်၍ အမှာစကား ပြောကြား ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် အမှာစကားပြောကြား ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာဂုဏ်ထူးဆောင် ကောင်စစ်ဝန်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ယန်ဟို့လန်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့ အခြေစိုက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုဖလှယ်ရေး ကောင်စီ (The International Friendship Exchange Council- FEC) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Mr. Norio Yamaguchi ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးသို့ တွဲဖက်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီး H.E. Mr. pascal CANFIN ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း Ruby Hall နှင့် Jade Villa အဆောက်အဦများ အချန်မီပြီးစီးရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး တက်ရောက်အမှာစကား ပြောကြားပြီး Ruby Hall နှင့် Jade Villa များ တည်ဆောက်နေမှုအား လှည့်လည် ကြည့်ရှုစစ်ဆေး ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း လာအိုနိုင်ငံ၌ ကျင်းပမည့် ဆွေးနွေးပွဲနှင့် ညီလာခံများသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည့်ခရီးစဉ်ဓါတ်ပုံများ Pages1
ဒုတိယသမ္မတ ဦးဉာဏ်ထွန်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ပြောင်းရွှေ့ နေရာချထားမှုများ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရန် စစ်တွေမြို့သို့ ရောက်ရှိ ဒုတိယသမ္မတ ဦးဉာဏ်ထွန်း ဂျပန်နိုင်ငံ J X Holdings, Inc., JX Nippon Oil & Energy Corporation ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Yasushi Kimura ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ ဒုတိယသမ္မတ ဦးဉာဏ်ထွန်း ဂျပန်နိုင်ငံ အထက်လွွှတ်တော်အမတ်ဟောင်းနှင့် ဂျပန်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ (၁၁) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ တိုက်ကွမ်ဒို ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ အမျိုးသားအဆင့် ပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ ရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်း စီမံချက် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားနှင့် ပထမအကြိမ် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ ဒုတိယသမ္မတ ဦးဉာဏ်ထွန်း အမေရိကန် လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဟောင်းနှင့် Asia Group ကုမ္ပဏီ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Dr. Kurt Campbell ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ ဒုတိယသမ္မတ ဦးဉာဏ်ထွန်း ရွက်လှေပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပနေသည့် ပင်လယ်ပြင်အတွင်း သွားရောက်ကြည့်ရှု ဒုတိယသမ္မတ ဦးဉာဏ်ထွန်း ပုသိမ်မြို့ ဘောလုံးအကယ်ဒမီ သင်တန်းကျောင်းနှင့် စက်မှုဇုန်တို့အား လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး ဒုတိယသမ္မတဦးဉာဏ်ထွန်း ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေး၊ ပြည်ပကုန်သွယ်ရေးနှင့် ဥရောပရေးရာဝန်ကြီး H.E Mr. Didier Reynders ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ ဒုတိယသမ္မတ ဦးဉာဏ်ထွန်း ဗြိတိန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း The Rt . Hon. Anthony Blair ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ (၂၇) ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲအကြိုမြင်းစီးအားကစားပြိုင်ပွဲဖွင့်ဖွဲ့ အခမ်းအနားသို့ ဒုတိယသမ္မတဦးဉာဏ်ထွန်းတက်ရောက် အားပေး ဒုတိယသမ္မတ ဦးဉာဏ်ထွန်း တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အာရှရေးရာဌာနမှ အထူးကိုယ်စားလှယ် H.E. Mr. Wang Yingfan အားလက်ခံတွေ့ဆုံ Pages1